September 2014 ~ SAI SENG SERK
ရန်ကုန်မှာ အဆာပြေစားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးနေရာကို အစားထိုးဝင်လာနေတာကတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲပါ။ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေ ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားတဲ့ဓလေ့ဖြစ်လာအောင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ၉၉၉ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးဆီ ခေါ်သွားပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၆နှစ်လောက်ကတည်းက ၃၄လမ်း အလယ်ဘလောက်မှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်သားတွေတင်မက နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေပါမက်မက်မောမောစားတဲ့ နေရာလည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ခရီးသွားလမ်းညွှန် Trip Advisory ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်ရဲ့ အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ နံပါတ် ၃နေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ၉၉၉ ဆိုင် ဘာ့ကြောင့်လူကြိုက်များတာလဲ။
၉၉၉ ရှမ်းခေါက်ဆွဲရဲ့ အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဖော်မြူလာနဲ့ ဖော်စပ်နေတာတဲ့ ငံပြာရည်ဖြစ်ပြီး ဒီငံပြာရည်အစွမ်းကြောင့် နှစ်ပေါင်း၎ဝ လောက်ရပ်တည်နိုင်တာပါလို့ ပြောပြသူကဆိုင်ရှင် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းပါ။
ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အရည်၊ အသုပ်၊ အချို၊ ဆီချက်ဆိုပြီး အရသာ ၄မျိုးရှိသလို ရှမ်းခေါက်ဆွဲလုပ်ဖို့ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်သား၊ ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ မြေပဲဆံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၉၉၉ဆိုင် ဖွင့်ခါစက ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားတဲ့ဓလေ့ မထွန်းကားသေးတဲ့ ရန်ကုန်မှာ ၃နှစ်လောက် အရှုံးခံရောင်းခဲ့ပြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေ လာအားပေးရာကနေ လူသိများလာတာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ခေါက်ဆွဲရဲ့အသားဟာ စေးကပ်တာမရှိဘဲလျှာနဲ့ထိတွေ့လိုက်တာနဲ့ နူးညံ့တဲ့အထိတွေ့ကိုပေးပြီး အရသာကောင်းတာကြောင့် သူတကယ်ကြိုက်တယ်လို့ နိုင်ငံသားခရီးသွားတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ကတည်းကပုံမှန်အားပေးနေတဲ့ ဒေါ်ဇင်မေထွန်းကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာစားနေပေမယ့်အရသာပြောင်းမသွားသလို ခရမ်းချဉ်သီးတွေနဲ့ ပြစ်ခဲနေတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလိုမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။
>>> Thank you, Come reading and visit again kha <<<
10:15 PMNOTE BOOK
အခုလက်ရှိ အခြေနေအရ DKBA နှင့် စစ်အစိုးရတပ်များတင်းမာမှု ဖြစ်ပွားနေသည့်အချိန်မှာ ဖြူ စင်ရိုးသားသော တိုင်းရင်းသားများ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့်စစ်မှန်သောပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ပြုလုပ်နေချိန်မှာ စစ်အစိုးရဘက်မှငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားသော အပြုအမှုနဲ့ လုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ မြဝတီမှာ KNU/KNLAPC ဗိုလ်မှုးတိုက်ဂါးစခဲ့တဲ့ပြသနာမှာ နဲနဲလေးပါ။နောက် DKBA ဗိုလ်ကြီး ပစ်သတ်ခံရတာ။ ငယ်တဲ့ပြသနာကို ပျောက်အောင်လုပ်ရမဲ့အစား အဲဒါကို အစိုးရက ညှိညှိနီုင်းနိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး လုပ်နိုင်လျှက်သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့သူတို့တပ်ရင်း ၂၇၅ ကိုစပြီးခြေရှုပ်လာရသလဲ။ ဒါပထမစဉ်းစားစရာအချက်ပါ။နောက် DKBA ကလိုထူးဘောစစ်ဗျူဟာမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးစောဆန်းအောင် ရန်ကုန်မှာလာအစည်းဝေးတက်တဲ့အချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်တိုင် ကျိုက်မရောမှာ သူအဝင်ထွက်ရှိတဲ့အိမ်ကို ဘာဖြစ်လို့ အလစ်ငိုက်ဝင်ဖမ်းရသလဲ။ ဝင်ဖမ်းတာတောင် သာမန်စစ်ဆေးမှုမဟုတ်ဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ ခေတ်မီနည်းပညာ မိုင်းရှာဖွေရေးကိုရိယာများကိုပါ သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ DKBA နဲ့တိုက်ပွဲစဖြစ်တဲ့ ၂၆ ရက်မနက်မှာ ၇န်ကုန်မှာကျင်းပနေတဲ့ UWPC နှင့် NCCT တို့ဆီကို တိုက်ရိုက်သတင်းရောက်လာပါတယ်။ NCCT အဖွဲ့ဝင် ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှုးစောလုံ့လုံက ကစထမှုး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦးနှင့် ဦးအောင်မင်းဆီ ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားလျှက်သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ အဆင်မပြေရတာလဲ။ နောက်သတင်းက အမျိုးမျိုးထွက်ပြီး DKBA ကစတိုက်သလိုလိုမျိုးလဲ တချို့ မီဒီယာတွေက ရေးသားနေကြတယ်။တချို့ မီဒီယာတွေကလဲ နဲနဲလေးကြားတာကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး ရေးနေကြတာလဲ တွေ့နေရပါတယ်။ တို့ပြည်သူတွေဟာ လှုထုတိုက်ပွဲ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲ မြင်ချင်ကြပြီးလား။ ဖြစ်ချိန်တန်ပြီးလား။ ၂၀၁၅ အတွက်ရော ရောက်နေပြီးလား။ UPWC နဲ့ NCCT တို့ကို တွေ့ဆုံမှုကို မယုံကြည်ကြတော့ဘူးလား။ UNFC ရော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလား။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစု တွေကို အထင်သေးရင်လျှော့တွက်ရင် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးသလိုမျိုး ဖြစ်သွားမယ်။။။။
9:03 PMNOTE BOOK
အဖွဲ့အစည်းတခုမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အရည်အချင်း မရှိရင် အဖွဲ့အစည်း မတိုးတက်နိုင်ဘူး ဒီလိုဘဲ ရှမ်းလူမျိုးကို ကိုယ်စား ပြုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မှာလည်း အရည်အချင်း နဲရင်(သို့)အရည်အချင်း မရှိရင်ရှမ့်းလူမျိုး မတိုးတက်တော့ဘူး သူများအောက်မှာ၊ သူများနောက်မှာ အမြဲတမ်း ရှိနေရတော့မယ် လူအများရဲ့ ဆန္ဒကို ကိုင်စွဲ ပြီး ရှေ့သို့ ဦးဆောင်သွားသော ပုဂ္ဂိုလ် များဟာ ပင်ကိုအရည်အချင်းကို မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင် ပြီး ရှမ်းဘဲဟေ့ ...ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် နဲ့ ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန် အပြည့် နဲ့ အခွင့်အရေး ကို မဆုတ်မနစ် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီး အရယူသွားနိုင်ရမယ် မဲပေးသောပြည်သူများလည်း မဲပေးရကျိုးနပ်သလို ပြည်သူ့မဲပြားများကို ဆုပ်ကိုင်သင့်၊ ဆုပ်ကိုင်ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် သွားနိုင်သလို အမျိုးဂုဏ်လည်း တင့်တယ် တယ် ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်လည်း တောက်ပြောင်စေတာဘဲ
မဲပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မဲအပေးခံရသော ပုဂ္ဂိုလ် များကို သေချာစွာ လေ့လာသင့်သလိုမဲအပေးခံရသော ပုဂ္ဂိုလ် များကလည်း ကတိပေးသည့် အတိုင်း တာဝန်ကြေနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အပြောကောင်းကောင်း နဲ့ ပြည်သူ့မဲပြားကို ကိုင်ပြီး ဝင်သွားတယ် ပင်ကိုအရည်အချင်းက နဲတော့ ရှမ်းပြည် နဲ့ ရှမ်းလူမျိုး များ အကျိုးကို ထူးထူးခြားခြား မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးအချိန်ကာလအပိုင်းအခြား တခုကို ကျော်လာခဲ့ပြီးပြီ သက်တမ်း ကုန်လုနေပြီ ရှမ်းပြည် နဲ့ ရှမ်းလူမျိုး များအတွက် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်မလာသေးပါဘူး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကြားထဲက၊ ဘောင်အကန့်အသတ် ကြားထဲက ရှမ်းလူမျိုးများရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ကို ထင်ဟပ် နိုင်အောင်၊ အခွင့်အရေး ရအောင်လမ်းဖောက်နိုင်ရမယ်၊ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရမယ် အဲဒါ ပြည်သူကပေးသော မဲတပြားရဲ့ တန်ဘိုးသာဖြစ်တယ် မဲတပြားရဲ့ တန်ဘိုး အတိမ်အနက်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရင် ပုခုံးပေါ် တင်ထမ်းထားတဲ့ မဟာတာဝန်ကြီးတရပ်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် တန်ဘိုး ထားမှာမဟုတ်ဘူး လေးလေးနက်နက် ဖြစ်ပြီး စိတ်နှစ်၊ ကိုယ်နှစ် ပြီး လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်
မရှိတဲ့ အခွင့်အရေး ၊ ပိတ်ပင်တားဆီး ထားတဲ့ အခွင့်အရေး များကို ရဲရင့်မှုနဲ့ လိမ္မာပါးနပ်မှုကို အသုံးချပြီး ရယူဖန်တီးသွားနိုင်ရင် အဲဒါ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း ဘဲ ရှမ်းပြည်မှာ ဒီလို ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိနိုင်ကောင်းပါရဲ့......... ပုံပြင်တခုကို သွားသတိရမိတယ် ရှေးအခါက တိုင်းပြည်တပြည်မှာ ဘုရင်သစ် နန်းတက် အုပ်စိုးသတဲ့ မြို့စား၊နယ်စား၊ မျိုးနွယ်စုအသီးသီးကို လာရောက် ခစားဘို့ စာထုတ်ပြီး ဆင့်ခေါ်လိုက်တယ် နယ်ပယ် အသီးသီးက မျိုးနွယ်စုအသီးသီး နန်းတော်ကို ဝင်ရောက်ခစားကြတယ် လက်ဆောင်ပဏ္ဌာအသီးသီး ဆက်သကြတယ် အချိန်ကျလို့ ဘုရင်ကြီးက သူ့ရဲ့နန်းတက်ပွဲကို လာရောက်ခစားတဲ့အတွက် အထူးအခွင့်အရေး ပေးမယ် လိုရာကို တောင်းဆိုကြပါတဲ့ မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်အသီးသီး တယောက်ပြီးတယောက် လက်အုပ်ချီ ပြီး လျှောက်တင်ကြတယ် ဘုရင်ကြီးကလည်း အမိန့်စာထုတ်၊တံဆိပ်ခတ်နှိပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ပေးအပ်လိုက်ကြတယ် ခပ်လှမ်းလှမ်း နောက်ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ လူတယောက်က ကြည့်နေတယ် ဘာတွေလျှောက်တင်ပြီး ဘာတွေအမိန့်ချပြီးခွင့်ပြုသလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားနေတယ် နန်းတက်ပွဲပြီးလို့ ပြန်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလူက မြို့တံခါးမှာ စောင့်ပြီး တယောက်ပြီးတယောက် မေးသွားခဲ့ကြတယ် တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ် ကကိုယ့်နေရာဌာနမှာ ကိုယ့်ဘာသာ စီမံခန့် ခွဲ အုပ်ချုပ်ဘို့ လျှောက်တင်ကြတယ်တချို့ သောပုဂ္ဂိုလ်က ကိုယ့်နေရာဌာနမှာ မဖွံ့ဖြိုးလို့ နည်းပညာနဲ့ ပညာရှင် အကူအညီ ရဖို့ လျှောက်တင်ကြတယ်
တချို့ သော ပုဂ္ဂိုလ် က ကိုယ့်နေရာဌာနမှာ နေထိုင်စားသောက်မှု ခေါင်းပါးလို့ စားနပ်ရိက္ခာ ကူညီ ထောက်ပံ့ဘို့ လျှောက်တင်ကြတယ် တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ် က နားမလည်လို့၊မလျှောက်တတ်လို့ ဘာမှ မလျှောက်ဘဲ နေကြတယ်ခြုံပြီး သုံးသပ်ကြည့်ရင် လူ(၄)မျိုးတွေ့ရတယ် ။
(၁)ကိုယ့်လူမျိုး၊ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ့်ဘာသာ စီမံခန့် ခွဲ ၊ အုပ်ချုပ်ဘို့ အခွင့်အရေး ရတဲ့လူ
(၂)ကိုယ့်လူမျိုး၊ကိုယ့်နေရာမှာ နည်းပညာနဲ့ ပညာရှင် စေလွှတ်ြဲပီး အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပေးတဲ့ အခွင့်အရေး ရတဲ့လူ
(၃)ကိုယ့်လူမျိုး၊ကိုယ့်နေရာမှာ စားနပ်ရိက္ခာ အပြည့်အစုံ ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ အခွင့်အရေး ရတဲ့လူ
(၄)ဘာမှ မသိလို့၊ ဘာမှနားမလည်လို့ ဘာမှ မလျှောက်တဲ့ လူ .....ဆိုပြီး လူ(၄)မျိုးခွဲခြားတွေ့ရတယ် ဘုရင်ကြီးပေးတဲ့အခွင့်အရေး မတူတာက လျှောက်တင်ကြတဲ့ လူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း သာ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်
ရှမ်းပြည်သူအပေါင်းတို့ မဲပေးရွေချယ်တဲ့နေရာမှာ လူ(၄)မျိုးထဲက ဘယ်အမျိုးအစားကို ရွေးပြီး မဲပေးမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ကြ.....မဲလည်းပေးခဲ့ဘူးပြီးပြီ ကိုယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပြည်သူအတွက် ဘယ်လို အလုပ် လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ.....သိမြင်လောက်ပြီပေါ့ အခြေခံ လူတန်းစား အတွက် မြေယာပြဿနာ၊ နည်းဥပဒေပြဿနာ စသည့်ပြဿနာပေါင်း များစွာကို ဘယ်ပြဿနာမှာ ပါဝင်ဖြေရှင်းဘူးသလဲ ဆိုတာ စဉ်စား၊သုံးသပ်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ အဲဒါ မှ မှန်ကန် တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် လွှတ်တော်ထဲဝင်၊ ဟုတ်ကဲ့ပြော၊ ပေးတာယူပြီး ပြန်ဆိုရင် ပြည်သူ့မဲပြားနဲ့ မတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာ ဖြစ်တယ်
ပြည်သူရဲ့ ဆန္ဒ၊ ပြည်သူရဲ့ မဲကို ရယူဖန်တီးနိုင်ရင် ပြည်သူ့ဆန္ဒ(သို့)အများအကျိုး အတွက် အခွင့်အရေး ကို ဖန်တီး ပေးနိုင်ဖို့ ခံယူချက်ထဲမှာ ထင်ဟပ် နေမှ ကြုံလာတဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံကို မညည်းတွားတမ်း ရင်ဆိုင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ် မဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း လူ(ူ၎)မျိုးထဲမှာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ကြမလဲ မဲပေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း လူ(၄)မျိုးထဲမှာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနေရာမှာ နေသင့်သလဲ ဖြစ်သင့်သလဲ ဆိုတာ ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြ............။ မဲပေးရွေးချယ်မှုပြုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် များလည်း မှန်ကန် တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ကို ရယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မှန်ကန် တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
>>> Thank you. Come read and visit again Kha <<<
11:12 AMSHAN VIDEO
SHAN CLOWN FUN 1
SHAN CLOWN FUN 2
SHAN CLOWN FUN 3
SHAN CLOWN FUN 4
SHAN CLOWN FUN 5
SHAN CLOWN FUN 6
SHAN CLOWN FUN 7
SHAN CLOWN FUN 8
SHAN CLOWN FUN 9
>>> Thank you, Come visit and watch again kha <<<
11:43 PMNOTE BOOK
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA ကို ဦးဆောင် တည်ထောင်ခဲ့သူ မဟာဒေ၀ီစောဝ် နန်းဟိန်းခမ်း ဖြစ်သည်။
ညောင်ရွှေစော်ဘွား စဝ်ရွှေသိုက်သည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် သိန္နီမြောက်ပိုင်း စော်ဘွာကြီး၏ သမီး (သိန္နီစော်ဘွား စဝ်ဟုန်ဖ) (ကွယ်လွန်) ၏ နှမ စဝ်ဟိန်းခမ်းဟိန်းနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ရွှေစော်ဘွားကြီး၏ ကြင်ယာတော် မဟာဒေ၀ီ စဝ်ဟိန်းခမ်းဟိန်း သည် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA ကို ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သူ သျှမ်းအမျိုးသားတို့၏ တော်လှန်ရေးမိခင်ကြီး စ၀်နန်းဟိန်းခမ်း ပင်ဖြစ်သည်။ ပထမကမ္တာစစ်ကြီး ပြီးသော အခါ စဝ်ရွှေသိုက် သည် စစ်မှုထမ်းအဖြစ် အနားယူခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယကမ္တာစစ်ကြီး ဖြစ်ရန် စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့များ တက်လာသော အခါစစ်မှုထမ်းရန် ပြန်ခေါ်ခြင်း ခံရပြန်သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယကမ္တာ စစ်ကြီး ပြီးဆုံးသော အခါ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ အရင်းရှင် အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတိုနှင့် အတူ တိုင်ရင်းသား စည်လုံး ညီညွတ်ရေးကို ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ပင်လုံ စာချုပ်ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးကို လည်း လုံးပမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနှိင်ငံကို တိုင်းပြု ပြည်ပြလွတ်တော် ဖွင့်လှစ်သော အခါ စဝ်ရွှေသိုက်အား ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တညီတညွတ်တည်း တင်မြောက်ခြင်း ခံရသည်။
ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီး စဝ်ရွှေသိုက် သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် လတ်လပ်ရေးရသောအခါ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ထဲမှ ပထမ ဆုံးသော မြန်မာနှိင်ငံ သမ္မတကြီး အဖြစ် တင်မြောက်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသော အခါလူမျိုးစု လွှတ်တော် နာယကကြီး အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြောက်ခြင်း ခံရပြန်သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အခြား နယ်ရှင် စဝ်ဖလုံတို့နှင့် အတူ စော်ဘွား ဆိုသော အာဏာ စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။
ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်၏ Profile Short
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနကို ထူထောင်၍ ကွယ်လွန်ချိန်ထိ ၄င်းဌာန လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ရှမ်းအမျိုးသား ကာတွန်းပညာရှင် ဟန်လေးက ဦးစိန်ကြည်သည် စကားပြောပြတ်သားသူ တဦးဖြစ်သလို လူငယ်ထုအပေါ်တွင် တိုးတက်စေချင်သည့် စေတနာကောင်းရှိသူ တဦးဖြစ်သည်။
ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်သည် ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက်(၅၉) နှစ်ရှိကာ ဇနီးနှင့် သားသမီး (၃) ဦး ကျန်ရစ်သည်။ဦးစိန်ကြည်သည် အတုယူစံထား အပ်သော သျှမ်းမျိုးချစ် တဦးဖြစ်သလို သတင်းလောကသား များရဲ့ ဆုံးရှူံးမှုတပ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့သလို သျှမ်းမျိုး ပြည်သူများ အတွက်လဲ ကြီးစွာသော နှစ်နာဆုံးရှူံးမှုကြီးပင်ဖြစ်သည်။
Get from : My Grandfather
>>> Thank You. You Watch <<<
1:01 AMNOTE BOOK
ခွန်ဆာသည် ရှမ်းပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်နှင့်Shan United Army နှင့် the Mong Tai Army တို့တွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၏ ။
သူအရွယ်ရောက်လာသောအခါ ကူမင်တန် တွင် စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်တွင် စစ်ရှုံးသောအခါ ယူနန်(Yunnan) မှ မြန်မာ (Myanmar) သို့ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး သူ၏ ကိုယ်ပိုင် တပ်မတော်ကို ရာဂဏန်း အနည်းငယ်ဖြင့်ချက်ချင်းပင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်း အစိုးရ လက်ထက်တွင် ရှမ်းသူပုန်များကို တော်လှန် တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အစိုးရအပေါ်သစ္စာရှိသော ဒေသခံစစ်တပ် အဖြစ် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ထိုသဘောတူညီချက်မှ ပိုက်ဆံ များ ၊စစ်ဝတ်စုံများ နှင့် လက်နက်များ ရရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူ၏ စစ်တပ်ကို တိုးချဲ့  ဖွဲ့ စည်းခဲ့ရာ အယောက် ၈၀၀ ခန့် ရှိသောအခါ မြန်မာအစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ရှမ်းနယ်မြေများစွာ နှင့် ၀ပြည်နယ်များ ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး ဘိန်းဖြူ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တိုးချဲ့  ခဲ့သည် ။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကူမင်တန် လက်ကျန်များနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရာမှ စစ်ရှုံး ခဲ့သောအရှိန်ကြောင့် ခွန်ဆာသည် စိတ်ဓါတ် အလွန်ကျဆင်းခဲ့သည် ။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် အစိုးရမှ သူ့အားဖမ်းမိခဲ့သည် ။
၁၉၈၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဝါးအတည်ပြု ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့  (US Drug Enforcement Agency)နှင့်ထိုင်းမြင်းစီး တပ်သား နှင့် မြန်မာမြို့ တွင်းပျောက် ကျား များ ဖြင့်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သော(၃၉)ယောက်သော အဖွဲ့ ဖြင့် ခွန်ဆာ အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပက်သုန်ချိုင်(Pak Thong Chai)မှ ထိုင်းမြင်းစီးတပ်ဖွဲ့  ၊ထိုင်းနယ်နိမိတ်လှည့်ကင်းရဲများ ၊ထိုင်းနန်းစဉ်တပ်မတော်(Royal Thai Army) တို့ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မှ ဘန်ဟင်တက်(Ban Hin Taek) ရွာလေးမှ ခွန်ဆာ၏ဌာနချုပ်ကို ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းတော်လှန်ရေးကောင်စီ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ထိုပူးပေါင်းခြင်းကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်နိမိတ် အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး မယ်ဆိုင် (Mae Sai)သည်လည်းရွှေတြိဂံဒေသ၏ ဘိန်းဖြူ မှောင်ခိုတင်သွင်းရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ခွန်ဆာ၏ ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်ရေးတွင် ပန်းသေး တရုတ် မူစလင် လူမျိုး မဇန်းဝမ် (Ma Zhengwen) မှကူညီခဲ့သည် ဟုသိရသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျ သတင်းထောက် စတီဗင်ရိုက်စ်(Stephen Rice)သည် ခွန်ဆာ(Khun Sa) အား တွေ့ ဆုံမေးမြန်းရန် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခိုးဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဘိန်း သီးနှံ အားလုံး ကို (၈)နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပြီးရောင်းချရန် သြစတြေးလျ အစိုးရအား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။တစ်နှစ်လျှင်ဘိန်းဖြူ တန်ဖိုး သြစတြေးလျဒေါ်လာ သန်း (၅၀)ခန့်မျှ (၈) နှစ် ၀ယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို သြစတြေးလျ အစိုးရမှ ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်အမတ် ဂရဲ(တ်)မ “သြစတြေးလျအစိုးရသည် ငြင်းဆိုကြောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ နှင့် အလုပ်မလုပ်ဘဲ ရိုးရှင်းစွာနေကြောင်း နှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သော လုပ်ဆောင်မှု များကို ရှောင်ကြဉ်ကြောင်း ”ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကြောင့်ပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ နှစ်ခုစလုံး၏ ဘိန်းဖြူ ရောင်းဝယ်ရေးအားလုံးနီးပါး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်(New York) သို့ ဘိန်းဖြူ တန်ချိန်(၁၀၀၀) တင်ပို့ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကြောင့်ခွန်ဆာ အား နယူးယောက် တရားရုံးမှစောင့်ကြည့် ခံနေရစဉ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှ သူ၏ဘိန်းထုတ်ကုန် အားလုံး ၀ယ်ယူရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သူ၏ အဆိုပြုချက်ကို ငြင်းဆိုလျှင်နိုင်ငံတကာ သို့ ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မီဒီယာပိုင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် သရုပ်ဆောင် ရစ်ရမ်း(Ric Young) က ခွန်ဆာ၏ အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ထားသော အမေရိကန် ဂမ်းစတား(American Gangster) ဟူသော ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်ခြင်း အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက် ၂၀၀၇ခုနှစ် ၊ ရန်ကုန်မြို့  တွင် ခွန်ဆာ အသက် (၇၃) နှစ် ကွယ်လွန်သည် ။ သူ၏ရုပ်အလောင်းကိုမြောက်ဥက္ကလာပရှိ ရေဝေးသုသာန်တွင်မြေမြှုပ်ခဲ့ သည်။
12:50 AMNOTE BOOK
3:26 AMNOTE BOOK
10:16 PMNOTE BOOK